Karaash oo ka warbixiyey socdaalkiisa Jabuuti iyo Imaaraadka
BOOSAASO, Puntland - Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, kana soo degey xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso, kadib safar shaqo oo ay ugu maqnaayeen dalalka Jabuuti iyo Imaaraadka.
"Aad bay farxad iigu tahay inaan Boosaaso maanta si rasmi ah uga soo degno aniga iyo weftigaygu, qorshaha waa iigu jirtey inaan halkan imaado, waxaa jirey safar shaqo oo aan hore ugu imi gobolka, lakiin rasmi muusan ahayn waxaan salaantii iyo ujeedkayagii shaqo idiin soo faray Guddoonka gobolka iyo degmada. Waxaan u mahadcelinayaa shacabka Boosaaso oo ay ugu horeeyaan Guddoomiyaha gobolka, kan degmada iyo cid kasta oo nasoo dhoweysey waa Alle mahaddiis".
"Aniga iyo wefti aan hogaaminayey waxaanu safar shaqo ku tagnay dalalka Jabuuti iyo Imaaraadka. Jabuuti waxaanu kala qayb galay xuskii maalintooda xuriyadda oo ahayd Juun, 27, 2019, aad iyo aad bay noosoo dhoweeyeen, si dowladdnimo leh ayay noo qaabileen, intii aanu joogneyna kulamo badan baanu yeelanay, abaal ayay inagu leeyihiin, waxaa tusaale u ah hiil Walaal," ayuu yiri
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland ayaa intaasi raaciyey: "Safarka kaas noogu xigey wuxuu ahaa Imaaraadka, waxaanu ku kulanay Jaaliyadda dalkaasi ee reer Puntland ee u badan Ganacsatada. Alle mahaddii safaradaasi waxay noogu soo dhammaadeen Guul."
Wafdi ka socda xukuumadda Abu Dubai ayaa ka degay magaaladda dekadda leh ahna xarunta gaancsiga Puntland.
Madaxii Amniyaatka Al-Shabaab ee Muqdisho oo dil lagu xukumay
Wararka 29.07.2019. 14:46
Axmed Karaash oo socdaal ku tegay magaaladda Boosaaso
Puntland 09.06.2019. 21:00
Deni oo gaaray Boosaaso, kana hadlay amniga magaaladda
War Saxaafaded 30.03.2019. 19:57
Axmed Karaash: Beesha Caalamka waa in hadalku u bedashaa ficil
Puntland 24.03.2019. 06:32
Puntland: Toogasho ka dhacday Xarun uu ku sugnaa Gaas [Khasaaraha]
Puntland 24.09.2018. 13:28
Madaxweyne Gaas oo shaqadii ka cayriyay mas’uuliyiin katirsan Wasaaradda Kalluumaysiga
Puntland 02.05.2018. 20:46
Madaxii hore ee Jeel Ogaadeen oo xil sarre loo magacaabay 17.10.2019. 10:27
Boqorka Morocco oo cafiyey wariye loo xiray in ay ilmo iska soo xaaqdey 17.10.2019. 07:17
Khayre oo ka warbixiyey ujeedka socdaalkiisa dalka Mareykanka 17.10.2019. 06:34
Baarlamaanka Mareykanka oo cambaareeyay talaabadda Trump 16.10.2019. 22:51
Deni oo Kismaayo kula kulmay Isimada iyo Nabadoonada Jubaland 16.10.2019. 19:42